I-Posh Rust Hack 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Posh Ukugqwala kweRust
Akusobala yini? Singabantu ukukhetha okuhle kakhulu kweRust PvP Hacks - thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Sebenzisa i-Rust Posh Hack yakho ukuzuzisa isikhathi eside kunosuku uma ungathanda - thenga ukhiye womkhiqizo weviki eli-1 namuhla!
Kungani ungazinikeli kokukhulu? Ungagenca nokude kakhulu - thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
Rust Posh Hack Imininingwane
Ingabe ungumdlali weRust ovame ukugxila kwisici se-PvP sezinto? Ngenye yezindlela ezinganakwa kakhulu zomdlalo, futhi kuyadumaza ngandlela thile ukuthi abantu abaningi abayidlali! Uma kushiwo lokho, kungahle kube ngenxa yakho konke "ukujuluka okukhulu" okulindelwe izithunzi zabadlali be-novice - uma ngabe ubesohlangothini olungafanele lwe-noob beatdown eRust PvP, leli yithuluzi elihle kuwe. I-Rust Posh Hack yethu izinikele ngokuphelele ku-PvP, ngakho-ke uma leyo kuyindlela yakho yokuzikhethela, leli ithuluzi okufanele ube nalo.
Kunezici eziningi ze-PvP okufanele uzicabangele, njenge-Enemy ESP ne-Enemy Info (ukuthi basele impilo engakanani, ibanga, amathambo e-ESP, njll.) Kanye neRust Aimbot ehlukahlukene. Ngenkathi ingenazo izici ze-PVE, kuseseyithuluzi elisebenzayo kulabo abafuna ukusho ukuncintisana.
I-Posh ukukopela okuqondiswe ku-PVP. Ayinazo izici ze-PVE.
Isitha ESP (Ibhokisi, amathambo)
Imininingwane Yesitha (Ezempilo, abalele, njll)
Ama-palettes ombala we-ESP
Imodi yosuku njalo
Mayelana neRust Posh
I-Rust Posh iyi-PvP cheat elula kakhulu engasetshenziswa yinoma ngubani, njengoba konke okumele ukwenze ukusebenzisa i-hack. Ukukopela kungaphandle futhi akunakusetshenziswa kwimodi yesikrini esigcwele, futhi akufiki ne-HWID Spoofer (yize sinikeza inketho ye-HWID Spoofer yeRust!). Leli yithuluzi le-PvP elilunge kunazo zonke ezake zakhishelwa iRust, ngakho-ke ungaphuthelwa yithuba lakho lokuzuza. Uma ugula futhi ukhathele ukulahlekelwa abadlali abanolwazi oluningi, noma ngisho nabaduni ngokufanayo, ungathembela kuRust Posh Hack yethu ukuze uqhubeke.
Kungani usebenzise iRust Posh ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
URust Posh yisisombululo esifanele sabadlali be-PvP embulungeni yonke. Njengoba sishilo ngaphambili, ayinalo uhlobo oluthile lwento ye-PvE, kepha isakunika inzuzo enkulu ngenkathi uncintisana ku-inthanethi. Uzobe uhlasela izisekelo futhi ubulale abadlali bezinga eliphakeme ngokushesha lapho iRust Posh Hack yethu inikwe amandla, njengoba yakhiwe kuphela ukukuguqula ube ngumshini wokubulala. I-Rust Aimbot efakwe ngaphakathi ayiqhathaniseki maqondana nekhwalithi, kanye nezici zokuphepha! Uma ufuna ukungena ku-Rust PvP ngokuthula kwengqondo, ayikho enye indlela engcono yokugenca i-Rust Posh Hack ye-Gamepron!
Ungasondela kumuzwa wakho we-PvP ngokuthinta wena uqobo, njengoba ungenza ngezifiso ngokuphelele izilungiselelo zokugenca ezitholakala kuRust Posh. Imenyu engaphakathi kwegeyimu inembile kakhulu futhi ikuvumela ukuthi ushintshe cishe noma yini, kusukela ngejubane lapho iRust Aimbot yethu izohamba khona, iye phansi kuziphi izinketho ze-ESP ozozibona esikrinini sakho. Sonke sihlela ukudlala umdlalo ngokuhlukile, yingakho singafuni ukukhawulela abasebenzisi bethu ekusebenziseni izilungiselelo ezijwayelekile zokugenca. Uma ufuna ukushintsha okuthile, kwenze! Hhayi lokho kuphela, kepha imenyu engaphakathi komdlalo ayisekho.
A5. Yebo, lokhu kukopela kufaka phakathi i-hwid spoofer.
I-A6. Cha, le nkohliso ayisebenzi ngesikrini esigcwele
Ilungele Yengamela ngeRust Posh Hack yethu?